Momba anay - Goldpro New Material Co., Ltd.
Niorina tamin'ny Jona 2010 ny Goldpro New Material Co., Ltd., ny renivohitra voasoratra anarana dia 200.3 tapitrisa （RMB, izay manana faritra 100.000 metatra tora-droa, ary manana mpiasa maherin'ny 260, ao amin'izy ireo dia misy teknisiana R&D 60. Goldpro dia orinasa teknolojia avo lenta, izay mampiditra ny akora sy ny vokatra mamolavola, famokarana, fanandramana, varotra sy serivisy amin'ny fikosoham-bary mitoto, ny fikosoham-bary, ny tehina, ny fametahana.
Ny Goldpro dia mamokatra ny bolongam-bary manosihosy rehetra, ny fikosoham-bary, ny basy mitoto ary ny linera ho an'ny indostrian'ny fitrandrahana, zavamaniry herinaratra, fitaovam-panamboarana ary indostrian'ny fikosoham-bary hafa. Amin'izao fotoana izao, manana andrana famokarana 14 manadino sy mihodina isika, miaraka amin'ny herinaratra 200,000 taonina. Goldpro no fototry ny famokarana haino aman-jery vita amin'ny haino aman-jery sy famokarana, ny vokatra nasongadiny dia manokana ho an'ny SAG Mills lehibe. Namidy tamina faritany sy faritra 19 tany Chine ny vokatrao, ary navarina tamina firenena sy faritra 20 mahery toa an'i Chili, Afrika atsimo, Etazonia, Ghana, Brezila, Peru, Mongolia, Australia, Russia, Kazakhstan, Philippines ary sns.
Ny Goldpro dia nahavita nanamafy ny fifandraisan'ny fiaraha-miasa amin'ny famokarana, fianarana sy fikarohana miaraka amin'ny oniversite sy oniversite 6, izay ny Akademia Hu Zhenghuan avy ao amin'ny University of Science and Technology, Akademia Qiu Guanzhou avy ao amin'ny Central South University, University of Tsinghua, Ivei University of Science and Technology, Hebei University ny teknolojia sy ny University of Science and Technology ao Jiangxi. Nametraka ny toeran'ny akademisiana fizaram-paritany sy ny fanovana ny akademia. Goldpro no foibe ara-teknolojia ara-toekarena ao amin'ny faritanin'i Hebei, foiben'ny famoronana ball ball sy ny foiben'ny fanavaozana fototra, Hebei postdoctoral fanavaozana fanavaozana.
Ny Goldpro dia manana patanty ara-teknika 100 sy zava-bita fototra. Isika dia "bobom-bola vita amin'ny vy milina fanosotra mitaingotra volo miorim-paka" sy "vy vy" sy tehina ho an'ny milina fitotoana ". Ny vondron-drafitra fananganana fenitra eo an-toerana misy ny faritanin'i Hebei, "fanadino ny baolina vy" orinasa orinasa fanavaozana fananganana.
Ny Goldpro dia fantatra amin'ny maha-harem-pirenena avonavon'ny fananana ara-tsaina, ny orinasa fanamarinana rafitra ara-tsaina momba ny fananana ara-tsaina, orinasa fampisehoana fanavaozana ara-teknolojia Hebei, orinasa fanavaozana momba ny fitantanan-draharaha Hebei, orinasa fanavaozana momba ny fitantanan-draharaha Hebei, ny faritany Hebei "manokana sy fanavaozana" orinasa kely sy salantsalany. , orinasa mandroso miantoka amin'ny kalitaon'ny hebreo Hebei, dia ny fanavaozana sy ny ekipa mpandraharaha Hebei "Hebei provinsi" sy ny orinasa mpandraharaha, Handan. Ekipa folo fanavaozana ara-tsiansa sy teknolojika ara-teknolojia ao Handan City, Nahazo ny mari-pamantarana malaza amin'ny faritanin'i Hebei izahay, vokatra malaza amin'ny faritany Hebei, dia ny valin'ny fanolorana ny manam-pahefana fahaefatra an'ny Ben'ny tanàna efatra.
Ny Komity Mpanolotsaina monisipaly Gao Hongzhi no nanamarina ny Goldpro
Tonga tao Goldpro ny lefitry ny Ben'ny tanàna lefitra Du Shujie.
Sekretera ao amin'ny komity antoko eo amin'ny distrika Dong Mingdi
Mission: Mamorona fiaramanidina fiaramanidina siantifika sy teknolojika momba ny fitaovana miakanjo akanjo, Momba ny angovo tsy an-kiato ary mampihena ny fanjifana ho an'ny indostrian'ny fikorotanana manerantany.
Vision: Mamorona fototry ny famokarana haino aman-jery mifangaro, ho orinasa ivon-toerana, ho marika manerantany.
Sanda fototra: Fanavaozana pragmatic fanavaozana rehetra-win
Fanahy: fahaizana taozavatra
Filozofia momba ny marika: Fanamafisana ny kalitao; Fampanantenana volamena
Filozofia ara-barotra: Lanja famaritana ho an'ny mpanjifa, fahombiazana betsaka
Filozofia fitantanana: Ny fahafaha-miorina amin'ny valiny, ny valisoa amin'ny fanomezana.
Filozofia talenta: Andraikitra ho an'ny fanokanana matihanina